ဒရက်ခ်မာ၊ ယူရိုငွေကြေးမတိုင်မီဂရိငွေကြေး | Absolut ခရီးသွား
maruuzen | | ဂရိနိုင်ငံ
သင် drachma အကြောင်းကြားပြီးပြီလား သေချာတာပေါ့၊ အထူးသဖြင့်ခင်ဗျားအသက် ၃၀ ကျော်ပြီ၊ ပြီးတော့ဥရောပမှာနေမယ်ဆိုရင်ပေါ့။ The မင်းသမီး ၎င်းသည်ဂရိနိုင်ငံ၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ယူရိုငွေရောက်ရှိချိန်အထိအကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုခဲ့သောငွေကြေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရှည်လျားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောသမိုင်းရှိပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အခန်းအချို့ကိုသိတော့မည်။ ဒီခရီး
ဒရက်ခ်မာ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာပြန်တတ်၏, ဒါပေမယ့်သူကစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုမရအဖြစ်ရှုပ်ထွေးမနေပါနဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ XNUMX ရာစု၏ပထမတစ်ဝက်ကနေခေတ်သစ်ဗားရှင်းသုံးခု နောက်ဆုံးတွင်ဂရိသည်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပြီးကျန်နိုင်ငံများနှင့်ငွေကြေးကိုမျှဝေသုံးစွဲသည်အထိ၊
1 ရှေးခေတ် drachma
2 ခေတ်သစ် drachma
ကျနော်တို့ဒရက်ခ်ျ၏ဇာတ်လမ်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲနိုင်သည်။ ရှေးခေတ်ကဒရဟ်နှင့်ခေတ်သစ်ဒရက်ခ်မာ။ ဒီနာမည်ဘယ်ကလာတာလဲ အကြွေစေ့ရဲ့အမည်ဟာလက်ထဲမှာကိုင်ထားနိုင်တာနဲ့ဆက်စပ်နေပုံရတယ်။ drássomaiဘီစီ ၁၁၀၀ မှရှေးခေတ်ကျောက်ပြားများပေါ်ရှိအချို့သောကျောက်စာများ (ကြေးနီ၊ ကြေးဝါသို့မဟုတ်သံ) ကိုအလှည့်အဖြစ်ခေါ်ဆိုခြင်း၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးယင်းသည်ဤသို့ဖြစ်သည်။ ခွေးရူး.
အချိန်ပြီးနောက် ရှေးဂရိများမှထုတ်လုပ်သောဒင်္ဂါးများစွာအတွက်ငွေစံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်လာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အကြွေစေ့တစ်ခုစီသည်ဥပမာအေသင်သို့မဟုတ်ကောရိန္သု၌ရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ ကိုယ်ပိုင်အမည်ရှိကြသည်။ ဟုတ်တယ်၊ တစ် ဦး ချင်းစီမြို့က၎င်း၏ငွေကြေးရှိခဲ့ပါတယ် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သင်္ကေတနှင့်အတူ သူတို့ကိုအကြားညီမျှသတ္တု၏အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးအားဖြင့်ပေးထားခဲ့သည် သူတို့နှင့်အတူဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
ဒရက်ခ်မာအသုံးပြုသောရှေးဟောင်းမြို့ကြီးများအနက်များဖြစ်သည် အလက်ဇန္ဒြီးယား၊ ကောရိန္သု၊ hesဖက်၊ ကော့၊အခြားသူများအကြား။ ဘီစီ ၅ ရာစုတစ်ချိန်ချိန်တွင်ဒရက်ချ်လေးခုဟုသိကြသည့်အေသင်မြို့သားအကြွေစေ့သည်လူသိများပြီးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မဟာအလက်ဇန္ဒားမတိုင်မီအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။
ဖြစ်စဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်ပူဇော်ပေါ် မူတည်၍ ဒရက်ခ်မာကိုအလေးမများဖြင့်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ The စံr, သို့သော်, လူကြိုက်များဖြစ်လာတက်အဆုံးသတ်ကြောင်း၏ဖြစ်ခဲ့သည် 4.3 ဂရမ်, Attica နှင့်အေသင်ပိုမိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
နောက်မှ မဟာအလက်ဇန္ဒား၏အောင်ပွဲများနှင့်အောင်ပွဲများနှင့်လက်ချင်းချိတ်။ ဒရက်ခ်မာသည်နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သည် နှင့်အမျိုးမျိုးသောဂရိနိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဒါဟာအာရပ်ငွေကြေး, ထိုလူသိများသည် dirham, drachma ကနေ၎င်း၏အမည်ကိုရရှိသွားတဲ့။ အလားတူအာမေးနီးယား၏ငွေကြေးဖြစ်သည် dram ။
ရှေးခေတ်ဒရက်ရှ်မာ၏တန်ဖိုးကိုယနေ့သိရှိနိုင်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည် (ကုန်သွယ်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေးများသည်အတူတူပင်မဟုတ်သော်လည်းအချို့သူများသည်စွန့် စား၍ စွန့်စားစားပြုကြသည်) ၅ ရာစုဘီစီဒရက်ခ်မာသည် ၂၀၁၅ တွင်ဒေါ်လာ ၄၆.၅၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ ထို့အပြင်အမှန်တရားမှာလက်ရှိငွေကြေးများကဲ့သို့ပင်မိသားစုတစ်စုကိုနေထိုင်ရန်သို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ရန်အတွက်တူညီသောဒရက်ခ်မာကိုအမြဲတမ်းလိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ။
ဒရက်ခ်မာ၏အပိုင်းအစများနှင့်မြှောက်လဒ်များကိုလည်းများစွာသောပြည်နယ်များတွင်တွေ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အဲဂုတ္တုပြည်၌ပိုလီမီယာရှိခဲ့သည် pentadrachmas y octadrachms။ ထို့ကြောင့်အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ငွေဒရက်ခမာဟောင်း၏အလေးချိန်သည် ၄.၃ ဂရမ်ခန့်ဖြစ်သည် (မြို့ပြမှပြည်နယ်နှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားသည်) ။ ၎င်းကို ၀.၂၂ ဂရမ် ၆ ခုခွဲခြားထားသည်။ အလှည့်ကိုဒင်္ဂါးလေးပြားနှင့် ၀.၁၈ ဂရမ်နှင့်အချင်း ၅ မီလီမီတာမှ ၇ မီလီမီတာအကြားခွဲထားသည်။
Drachma အဟောင်း၊ ၁၈ ရာစုပထမရာစုဝက်တွင်ဂရိဘဝသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့သည် မကြာမီတွင်ပြည်နယ်၏တည်ထောင်ပြီးနောက်။ ဒါဟာ 100 ကိုခွဲခြားခဲ့သည် လက်ပံကြေးနီနှင့်ငွေအချို့တို့ပါဝင်ပြီးဒီအဖိုးတန်သတ္တု၏ ၅.၈ ဂရမ်နှင့်အတူဒရက်ရှ်မာရွှေဒင်္ဂါး ၂၀ ရှိခဲ့သည်။
၁၈၆၈ တွင်ဂရိသည်လက်တင်ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှအသုံးပြုသောဥရောပငွေကြေးအမြောက်အမြားကိုစည်းလုံးစေသည့်စနစ်ကို ၁၉၂၇ အထိဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။ ဒရက်ခ်မာသည်ပြင်သစ်ဖရန်နှင့်အလေးချိန်နှင့်တန်ဖိုးညီမျှသည်။
သို့သော်ဤလက်တင်ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည်ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းနှင့်၎င်းထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအပြီး၌ပြိုလဲခဲ့သည် သမ္မတနိုင်ငံဟယ်လီနာ, အခြားဒင်္ဂါးပြားအသစ်များဒင်္ခဲ့ကြသည်။ ထိုလက်မှတ်တွေမှဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ ဂရိအမျိုးသားဘဏ်မှထုတ်ပေးသောငွေစက္ကူများ 1841 နှင့် 1928 အကြားဖြန့်ဝေ ထို့နောက်ဂရိဘဏ်က ဆက်လက်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် 1928 ကနေ 2001 အထိ ယူရိုမြင်ကွင်းတစ်ခုထဲသို့ဝင်သည့်အခါယခုအချိန်တွင်။
သို့သော်ဒရက်ခ်မာမတိုင်မီ ၁၉ ရာစုတွင်ဘာရှိခဲ့သနည်း။ ခေါ်တစ် ဦး ကအကြွေစေ့ ဖီးနစ် အရာတိုင်းပြည် Ottoman အင်ပါယာကနေလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့မကြာမီပြီးနောက်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၁၈၃၂ တွင် Phoenix အစားထိုးဂရိဒြပ်တော်၏ပထမဆုံးခေတ်မီဂရိဘုရင်ဘုရင် Oto ၏သရုပ်သကန်နှင့်အစားထိုးသည်။
ငွေဖောင်းပွမှုဖြစ်သည့်အခါနှင့်ဂရိသည်အတော်အတန်များပြားလှသောစီးပွားရေးသမိုင်းကြောင်းဖြစ်လေ့ရှိသကဲ့သို့ ၂၀ ရာစုတစ်လျှောက်တွင်ပိုမိုကြီးမားသောဂိုဏ်းဂဏများဖြင့်ငွေစက္ကူများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်s ။ အထူးသဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းနာဇီသိမ်းပိုက်ချိန်များ၌ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒီကျော်ကြားတဲ့အကြွေစေ့ရဲ့သမိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ် နာဇီများကျဆုံးပြီးနောက်အတိအကျပေါ်လာသည့်ဒုတိယခေတ်သစ်ဒရက်ခ်မာ။ ဂရိနိုင်ငံလွတ်မြောက်လာသည့်အခါငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းသည်များပြားလာပြီးစက္ကူပိုက်ဆံများကိုသာမြှုပ်နှံနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေတ်သစ်ဒရက်ရှ်မာ၏တတိယအချိန်ကာလထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းလာခြင်းနှင့်တန်ဖိုးနိမ့်သောတန်ဖိုးများရှိခြင်းနှင့်တန်ဖိုးနိမ့်သောငွေတောင်းခံလွှာများမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့သည်။ ငွေလဲလှယ်နှုန်း၏နှုန်းမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည် 30 အထိဒေါ်လာစျေး 1973 ဒရက်ခ်မာ။ ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ဉာဏ်ရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်ရေနံအကျပ်အတည်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်တွင်ဂရိ၌သာမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ငွေကြေးအခြေအနေပြောင်းလဲလာသည်။
နည်းနည်းချင်းစီ တစ်ဒေါ်လာဝယ်ရန်ဒရက်ခ်မာပိုများလာသည် ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကလာကြ၏ ၂၀၀၁ တွင်ဂရိသည်ဥရောပသမဂ္ဂသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဒရက်ခ်မာသည်ယူရိုငွေကြေးဖြင့်အစားထိုးလိုက်သောအခါပျံ့နှံ့သွားသည်။
ယူရိုငွေကြေးယှဉ်ပြိုင်ခြင်း၊ ယွမ်ပိုမိုအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်တစ်နေ့တွင်ဥရောပသမဂ္ဂဖျက်သိမ်း။ ဒရက်ခ်မာပြန်လာမည်ကိုမည်သူမျှအာမခံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဂရိနိုင်ငံအတွက်အသွင်အပြင်။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ဒရက်ခ်မာ၊ ယူရိုငွေကြေးမတိုင်ခင်ဂရိငွေကြေး
Savita Bhabhi - အိန္ဒိယ၏လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရုပ်ပြ